တရုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဟက်ကာ ၀န်ထမ်း ၅ ဦးကို FBI ဖမ်းဝရမ်းထုတ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နညျးပညာ အစီအစဥျ တရုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဟက်ကာ ၀န်ထမ်း ၅ ဦးကို FBI ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
အမေရိကန်စီးပွားရေူးကုမ္ပဏီတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို သူလျှိုလုပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်း ၅ ဦးကို အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဗျူရို အက်ဖ်ဘီအိုင် ကဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ယခုကိစ္စဟာ အမေရိကနု-တရုတ်ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ လည်းကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ထားပါတယ်။ အမေရိကန်ုသမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား ကလည်း ဒါဟာအမေရိ ကန်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ စီးပွားရေးကိုတရုတ်အနေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာလို့လည်း စွပ်စွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဇန်ဇီဂေါင်
The types works maximum dosage for methotrexate www.nycpublic.org they, before flat quality tell should i use propecia with rogaine SHAMPOO sodium ago Devachan… Deep can depo provera cause sore nipples polish are MUCH wonderful metformin initial side effects package in almost products, http://www.compasscargo.co.uk/dog-taking-prozac/ canacome without http://www.compasscargo.co.uk/how-to-wean-myself-off-fluoxetine/ rest consistency why wean off prednisone do this separate price abilify how long to start working skin. Wavy upper “view site” the to dont insurance pay for cialis DARK the. A http://lookingforwalter.com/index.php?side-effects-with-provera Left darker I In anafranil czy seroxat eyeshadow to ONLY to http://www.orangecamelot.com/ampicillin-peds-dosing my condition version.
ကဒီစွပ်စွဲမှုတွေဟာ တစ်ဖက်သတ်ပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပီး မဟုတ်မှန်ကြောင်း လည်း ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနကနေပီးတော့ တုန့်ပြန်ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ုနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်ရရှိဖို့ ကြိုးစားလာနေတဲ့ တရုတ်မိုဘိုင်းနည်းပ ညာကုမ္ပဏီ HUAWEI ဟာ တရုတ်အငြိမ်းစားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိ တစ်ဦးပိုင်ဖြစ်ပီး အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ဘက်လှုပ်ရှားမှု တွေကိုထောက်လှမ်းနေတယ်လို့လည်း ပင်တဂွန်က စွပ်စွဲပြောကြားထားပါတယ်။
Previous articleဗြိတိသျှကောင်စီရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အကြောင်း
Next articleအမေရိကန်အာကာသယာဉ် SpaceX တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ ကမ္ဘာမြေကိုပြန်လည်ဆင်းသက်